जनताको आफ्नो सेना नभई हुँदैन - inaruwaonline.com
जनताको आफ्नो सेना नभई हुँदैन
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण ०३, २०७३ समय: ३:५६:२२
धर्मेन्द्र बास्तोला स्थायी समिति सदस्य, नेकपा (माओवादी)
१. काठमाडौंमा महाधिवेशन उद्घाटन गरेर रोल्पाको थवाङमा बन्दसत्र गर्न जाँदै हुनुहुन्छ । दुईतिर महाधिवेशन गरेर के सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ?
सहरी केन्द्र र गाउँ जोड्ने हामीले भन्दै आएको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाअनुरूपको नीति हो । हिजो गाउँ घेर्दै सहर कब्जा गर्ने रणनीतिमा हामी थियौँ । तर, त्यसले मात्र पुग्दैन भनेर परिवर्तित सन्दर्भमा एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाअनुरूप हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । अबको नेपाली क्रान्ति हिजोको जस्तो ढंगले हुन सक्दैन । त्यसका लागि गाउँ र सहर दुवैलाई जोडेर नै अगाडि जानुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । त्यसरी नै गाउँ र शहर जोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने सन्देश दिन हामीले पार्टीको आठौँ महाधिवेशन काठमाडौंको खुलामञ्चमा उद्घाटन गरेर बन्दसत्र भने रोल्पाको थवाङमा गर्न लागेका हौँ । त्यसैले हामीले सहर र गाउँ दुवैलाई जोडेर पार्टीको कार्यदिशालाई पक्रिन खोजेका हौँ ।
२. विश्व कम्युनिस्ट इतिहासमा परिचित फरक शैलीको ‘ड्रेस कोड’का आधारमा केन्द्रीय नेताहरू महाधिवेशनमा देखिनुभयो । यसको पनि केही सन्देश छ कि ?
जरुर छ । उद्घाटन सत्रमा एउटै ‘ड्रेस कोड’ मा केन्द्रीय नेता देखिएर पनि हामीले एउटा फरक खालको सन्देश दिन खोजेका हौँ । डे«स कोडबाट हामीले क्रान्तिको झलक दिन पनि खोजेका हौँ । माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर सन्देश दिन पनि खोजेका हौँ । त्यसैले हामी केन्द्रीय समितिका सदस्यले एउटै पोसाक लगाएर क्रान्तिको सन्देश प्रवाहित गर्न खोजेका हौँ ।
३. के अझै पनि सशस्त्र संघर्षको औचित्य देख्नुहुन्छ ?
इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ, यस विषयमा । सेना नभएको जनतासँग आफ्नो भन्नु केही हुँदैन भन्ने कुराको पुष्टि यसबीच पनि भइसकेको छ । जनताको सेना आवश्यक छ भन्ने कुरा इतिहासले सावित गरिसकेको छ । तसर्थ पनि जनताको सेना बनाउनुपर्छ । सशस्त्र संघर्षको आवश्यकता नेपालमा अझै पनि छ । यसको औचित्यता छ–छैन भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गर्ने कुरा हो । यो पुष्टि भइसकेको छ ।नयाँ पत्रिकाबाट